Dacaayadda Raqiiska ah ee SNM | allsanaag
Dacaayadda Raqiiska ah ee SNM
SNM Dad shacab ah oo hubaysnayn ayeey xabbad ku fureen.
Sawirku waa Wiil yar oo dhaawaca ah, oo ka soo jeeda Beesha Warsangeli isaga oo gurigiisii Badhan jooga oo midnimada Soomaaliya ilaalinaya ayaa xabbad waxa loogu dhuftay soo raac beesha Isaaq iyo SNM
Nin magaciisa ku sheegay Dr.Saleebaan oo ku sugnaa yahay Cisbitaalka degmada Badhan ee Gobolka Sanaag, ayaa isaga oo la hadlaya Idaacad ka mid ah kuwa SNM wuxuu sheegay in degmada Badhan ay ku dagaalameen Somaliland iyo Puntland.
Warkaasi waa Been, Saleebaan iyo kuwa la mid ah oo dadka xabadeeyey waa kuwa mushahaarka ka qaata maamulka SNM iyo Alshabaab.
Dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo aaminsan in Beeli beel kale ayna u dawladayn karin, ayaa iyaga oo ka soo hor jeeda doorashada beelaha Isaaq ay ku doonayeen in ololaheeda maanta laga bilaabo degmada Badhan, waxay bilaabeen Mudaharaad ay arintaa kaga soo hor jeedaan.
Marabiddi u shaqaynaysay maamulka beelaha Isaaq ay ku wada midaysan yihiin ee SNM, markii ay arintaa arkeen si ay gudoomiyahooda oo lagu magcaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ku sugan degmada Ceerigaabo u raali geliyaan, waxay bilaabeen inay dadkii xabbad ku furaan iyaga oo haba yaraatee wax digniin ah siin. Waana markii sadexaad oo taliyahani degmooyinka gobolka Sanaag uu dad ku xabadeeyey. Maanta haddii uu dili lahaa Todoba qof oo hoos ku qoran oo hadda dhaawaca ah sheekadu sida waa ka duwanaan lahayd.
1 Cali Weyne oo ka soo jeeda Beesha Reer Garaad
2- Majagure Beesha Reer Garaad
3-Ina Ciise Dhiif Beesha Warlabe
4-Cabdi Wayd Beesha Dir
5- Ina Shire Saalax Caato Beesha Aadan Siciid
6 Ina Faan faan Beesha Adan Siciid
7 Xasan Dekeli Beesha Adan Siciid
Ugu danbayntii haddii aad doonayso inaad Ka qayb qaadato gurmadka looga hortagayo doorashada xaaraanta ah ee khasabka ah ee SNM, fadlan la xiriir Ururka SSP oo ah ururka qura oo fashilin kara huuhaada SNM Iyo Sanaag baa doorasho ka dhacaysaa. Maanta lama joogo maalintii dhex dhexaad laga noqon lahaa SNM iyo SSP oo isku haya gobolka Sanaag . Beesha Isaaq dhexdhexaad kama noqon siyaasadda Soomaaliya oo Somaliland ayeey ku midaysan yihiin. Adiguna dhex dhexaad ha ka noqon SSP iyo SNM
← Gaas oo Garoowe Kusoo Xidhay Shirweynaha Kalluumaysiga Soomaaliya. Dagaalka Warbaahineed ee SNM →